ကျွန်ုပ်ကြောင့်သာ ဤအကြောင်းဖန် - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home လူငယ် ဝတ္ထု ကျွန်ုပ်ကြောင့်သာ ဤအကြောင်းဖန်
Samuel Soe lwin 9:08:00 PM လူငယ်, ဝတ္ထု,
သူကြားဘူးခဲ့သည်ကားမှန်၏၊ သို့သော်ထိုကဲ့သို့ သောစကားပုံသည် ကိုယ်တိုင်ကြုံလာမည်ဟူ၍ကား လုံးဝထင်မှတ်မထားခဲ့ပါလေ။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ဆိုရသော်ကား တကြိမ်သည် ဆိုသာသော်လည်း ၊ နှစ်ကြိမ်မှ သည် သုံးလေးကြိမ်ရောက်လာသောအခါအဘယ်မှာလျှင် တိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်နည်း။ ယခုသော်ကြည့်ပါ။သူ၏ ဘဝတွင် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရသော အရာတို့သည်ကား အဘယ်သို့မှ ထင်မှတ်မထားသောအကြောင်းအရာ ကိစ္စများပင်ဖြစ်နေသည်။
တနေ့တနေ့ကိုကုန်လွန်ခဲ့ရသည်ကလည်း အလုပ်နှင့်လက်ဟူသည် ပြတ်သည်မရှိ၊ သို့တိုင်အောင် တမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာသည်ကား လုံးဝအလွတ်မပေး အနားမပေးပါ၊ သူရုန်းကန်နေရသည်က နဖူးကချွေးခြေမသို့ ကျသည့်တိုင် ဝမ်းတနပ်ကို မှန်ကန်ရုံသက်သက်သာ ဖြည့်ဆည်းပေးနေခြင်းလောက်သာဖြစ်သည်။ ဤသို့သော ဘဝပေးအခြေက ခက်ခဲသည့်အထဲမှာ သူ့အတွက် နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေဖြစ်ရသည်က 'သေခြင်းတရား၏နောက်တွင် အဘယ်သို့စိတ်အေးနိုင်မည်နည်း' ဆိုသောအတွေးတို့က နေ့ညမပြတ် ဝင်ရောက်မင်းမူနေလေ့ရှိသည်မှာကလည်း၊ ဘဝပေးအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှ ဉ်ပါက ' အကျိုးကဆော့ အကန်းကမော့'ဆိုသကဲ့သိုသာ ဖြစ်၍ ကြားရသူအပေါင်းကာ အူလှိုက်သဲလှိုက်ရယ်ကောင်း ရယ်ကြပေမည်။ ရှိစေတော့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိသမို့ ဒီဒုက္ခမှ ကင်းလွတ်နိုင်ရေး လမ်းစတော့ရှိရမည်ဆိုသော မျော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ဆက်ခဲ့ရသည်က၊ အသက်ပင် ထက်ဝက်ကျိုးခဲ့လေပြီ၊ တရားသဘောဖြင့် ပြောရပါက 'သေခြင်းသို့ လမ်းတဝက်ချိုးခဲ့လေပြီ'။
ရခဲလေသောဘဝဝယ်၊ ခက်ခဲလေသော အခြေအနေအရများကြားဝယ် မွေးသမိခင်ကိုပဲ အကြောင်းပြု အပြစ်တင်ရလေမည်လား၊ ဤသည်ကလည်း မဖြစ်နိုင်၊ မွေးသမိခင်ဆိုသည်ကလည်း မဟာကျေးဇူးရှင် စာရင်းဝင်ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောကတွင် အကျိုးရှိလျှင် အကြောင်းတော့ရှိရစမြဲပင်။ ထို့ကြောင့် တနေ့ဘဝအတွက် တွေ့ကိုတွေ့ရပေမည်ဆိုသည်က သူ၏ ထာဝရ အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီးကို မျော်လင့်နေသော သူကဲ့သို့ပင် ကြီးမားကြီးထွားလာသည်မို နေမြင့်လေ အရူးရင်လေဟူ၍ ဆိုရခြင်းပါ။
"နွေဦး ဘာကဘယ်လို စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ဒီကောင်လေးတွေနှင့် ပေါင်းသင်းနေရတာလည်းကွာ၊ လူဆိုတာက တံငါးနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုးတဲ့ကွ တော်ကြာမင့်လည်း သူတို့လို ဖြစ်သွားဦးမယ်နော် သတိထားပေါင်းပါကွာ ကောင်လေးရာ"
"စိတ်ချပါ ဦးလေး သာအောင၊် စိတ်ခွါကိုယ်ပေါင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျွန်တော် သူတို့နှင့် ပေါင်းနေပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ သတိမပြတ်ပါဘူးဗျာ"
ဦးလေးသာအောင်ဆိုသည်က သူ၏ဘကြီးဖြစ်ပြီး၊ အစစအရာရာတွင် ရှေ့ရေးကြိုတွေးကာ မြင်တတ်သူ နောင်ပြီး သူ၏ကောင်းစားရေးကိုသာ အစ ဉ်ရှေ့ရှု သောသူဖြစ်သည်။ ယခုပြောရခြင်းက သူ၌ အပေါင်းအသင်းသစ်များဖြစ်ကြသော၊ ပါးခိုရ်လာနှင့် မောင်ဗျက်ထောင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သူအနေဖြင့် မိတ်ဆွေသစ်များဖြစ်သော ပါးခိုရ်လာနှင့် မောင်ဗျက်ထောင်းတို့အား လုပ်ငန်းသဘောအရပေင်းသင်းဆက်ဆံပေမဲ့ ၊ လူမှုရေးကတခြား၊ ဘာသာရေးက တကဏ္ဍသီးသန့်ခြားနားထားလေသည်မို့ စိုးရိမ်စရာမရှိ။ သူတို့လမ်းသူတို့သွား၊ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွား ဖြစ်ပေသည်မဟုတ်ပါလား။
ယနေ့လည်း အားသည်ကတကြောင်း၊ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ကလေးမြို့သို့ စက်ဘီးလေးနင်းပြီးထွက်လာရာ၊ ဘာလိုလိုနှင့် ညောင်ပင်သာ ဘက်သို့ပင် ရောက်လု နီးနေပြီဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်စျေးဘက်လွန်၍ ဘုရားသုံးဆူဖက်မကွေ့ခင် ရုပ်ရှင်ရုံဘက်ကို ငဲ့စောင့်ကြည့်မိတော့ ' ဟော့ရှော့ ၂ 'ကိုရုံတင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ သူရုပ်ရှင်ကြိုက်ပါသည်၊ သို့သော် ဟိုအရင်တုန်းက ' နှမငယ်ထွေးငယ်ပါသေး' နှင့် ' သွေးနဲ့သစ္စာတည်ပါမယ်' လိုစသော ပညာပေး ကားမျိုးကိုသာ ကြိုတ်တတ်သောကြောင့် လာရင်းကိစ္စအတိုင်း ပါးခိုရ်လာ တို့အိမ်ရှိရာ ဘုရားသုံးဆူဘက်သို့ ကွေ့ဝင်လိုက်ပြီး၊ မီးသတ်စင်ကျော်လာတော့ အခန့်သင့်ပင် ရေချိုးနေသော ပါးရ်ခိုလာကိုတွေ့ရလေသည်။
" ဟာနွေဦး ဘာကိစ္စလည်းကွ စောစောစီးစီး၊ ခနစောင့်နော် ငါပြီးပါပြီ"
"အေးပါကွာ. ဘာမှမစိုးရိမ်နှင့်ငါ မင့်အိမ်ကို အေးအေးဆေးဆေးအလယ်လာခဲ့တာပါ"
ပါးခိုရ်လာက ချင်းတိုင်းရင်းသာဖြစ်ပေမဲ့ ဗမာစကားတော့ ကောင်းကောင်းတတ်သည်၊ သူ့မိဘများက တမူးမှဖြစ်ပြီး သူကလည်း အထက်တန်းပြီးသည်အထိ တမူးမှာ နေ၍ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့် ဗမာစကားကို ဗမာနီးနီးပြောနိုင်ဆိုနိုင်၍၊ လယ်လယ်ဝယ်ဝယ် အပေါင်းအသင်းကောင်းတဦးဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့တွင် သူစောင့်နေစ ဉ် သူ့မိန်းမဖြစ်သူ ခင်ခင်ထွေးက လဘက်သုပ်နှင့် ရေနွေးကြမ်းအား လာရောက်ချပေးသည်။ ခင်ခင်ထွေးက အမှန်တွင် ဗမာအမျိုးသမီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် အကြောင်းပါ၍ ပါးခိုရ်လာနှင့် တွေ့ဆုံဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
" ဆိုပါဦး ကိုနွေဦး ဘယ်လိုလည်း မလာစဖူး အလာထူးလှချည်လားအောက်မေ့နေတာ၊ ခုနကပြောစကားအရဆိုရင် အကြောင်းတခုခုတော့ ရှိကိုရှိနေတာပေါ့နော်"
"ဟုတ်တယ် ခင်ခင်ထွေး အမှန်တော့ငါနင်တို့ လင်မယားကို မေးချင်နေတာကြာပြီကွ မေးသင့်မမေးသင့်ဆိုတာကိုတာ ချင့်ချိန်နေတာ"
" အားနာစရာမရှိ အားနာစရာရှာလို့ ငါ့ကောင်ရာ၊ မေးစရာရှိရင်မေးပေါ့ ငါသိသလောက်တော့ဖြေပေးမှာပေါ့၊ အေးဒါပေမဲ့ ငါမသိရင်တော့ ငါမသိဘူးလို့ ဖြေပါနော် စိတ်တော့မရှိနဲ့"
ခင်ခင်ထွေးနှင့်စကားပြောနေစ ဉ်၊ ရေချိုးရာမှ တက်လာသော ပါးခိုရ်လာရဲ့အဖြေစကားကို သူကောင်းစွာ စ ဉ်းစားနေခိုက် အားလုံး ခေတ္တမျ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ သူတို့၏ ကလေးဖြစ်သူ အောင်မင်းကျော်ကတော့ ပြေးလွားစော့ကစားနေသည်မှ အပ အိမ်ရှိအရာအားလုံး ငြိမ်သက်သွားသည်။ ထိုအခိုက်တွင် အိမ်ရှေ့မှ စော့ကစားနေသော ကလေးငယ်တသိုက်က အော်ဟစ်နေကြသည်။
သူတို့၏ သားငယ်လေး အောင်မင်းကျော်ကတော့ဖြင့် ကစားနေရာမှ အီးဗွီဒီအောက်စက်ကို ဖွင့်နေပြန်သည်။ အကြောင်းအားလျှော်စွာပင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ကလေးသီချင်းကလေးက၊ သူ၏တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေသော စိတ်အား သာ၍ ရဲဆေးတင်ပေးသည့်အလားပင်ဖြစ်သည်။
" တောင်စွယ်တောင်ကြား လျှိမြောင်ချိုမ့်ဝှမ်း ပန်းများပွင့်တဲ့မြေ၊ ဝေဟင်ယံမှာ ပျော်ရွှင်ငှက်များ သံပြိုင်သီကျူးနေ၊ ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးတွေစော့ကစားနေ၊ မြင့်မြတ်သန့်ရှင်း ထာဝရဘုရားရဲ့ အကြံတော်ပါပဲလေ."
"အေးငါမေးချင်တာက အဲ့ဒါပါပဲ ကွာ"
"ဟယ် အရင်းမရှိ အဖျားမရှိနဲ့"
" ဟုတ်ပါ့ကွာ မင့်ဟာက ရှင်းစမ်းပါဦးကွာ၊ ငါလည်း ဗမာစကားတော့ ဒီနေရာမှာ နားမလည်တော့ဘူးကွာ နွေဦး၊ မင့်နဲ့တွေ့မှ ငါလည်း ဗမာစကား မတတ်သေးမှန်းသိလာရတော့တယ်ကွာ ဟား..ဟား..ဟား"
အခုမှ သူပြောချင်လွန်းအားကြီးသွား၍ စကားက မလယ်ရှုပ်ဖြစ်သွားမှန်း သူချက်ချက်သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူအရိုးရှင်းဆုံးဖြင့် မေးရန် အစပြုလိုက်သည်။
" ဒီလိုကွာ ယေရှုဘုရားက အစိမ်းသေဆိုတာ တကယ်လားကွာ ငါအဲ့ဒါကို အရမ်းသိချင်တယ်၊ နောက်ပြီး သူက ဘာ့အတွက်ကြောင့် သူ့သေခြင်းက ဒီလောက် အရေးပါရတာလည်း "
သူ၏အမေးစကားကိုကြားတော့ သူ့အထင်နှင့်တခြား ပါးခိုရ်လာနှင့် ခင်ခင်ထွေးတို့ကအပြုံးပင်မပျက် သူ့အား သေသေချာချာကြည့်ကာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြင့် နားစွင့်ကာ နေကြလေသည်။ သူ၏စကားအဆုံးမှာတော့ ပါးခိုရလာက စကားဆက်သည်။
" အေးပေါ့ကွာ ။မေးတော့လည်း ဖြေရတာပေါ့ အမှန်တော့ ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားက လူတွေသတ်လို့သေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ လူသတ်လို့သေတဲ့ဘုရားဆိုရင်တော့ ငါလည်း မကိုးကွယ်ပါဘူး "
" ဟာ..အားလုံးက ဒီလိုပဲပြောနေကြတာပါပဲ မင့်ကျမှ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလည်း ငါနားမရှင်းတော့ဘူး၊ ဒါဆိုရင်တော့ တနေရာရာမှာ မှားနေပြီ ပါးခိုရ်လာ "
" ဟုတ်တယ် နွေဦး မင့်ပြောသလို တနေရာရာမှာ လွဲနေတာကွ၊ ဒီနေ့လူတွေက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တိုင်းကို ယုံကြည်သူလို့ထင်ကြတာကိုက ပထမအမှားပဲ နောက်ပြီး ခရစ်ယာန်အမည်ခံတိုင်းက ဒီအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာက ဒုတိယအမှား နောင်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ ယုံတမ်းတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ မဟုတ်တမ်းရားစကားတွေက တကယ့်အမှားတွေပါပဲ၊ မင့်ရှင်းအောင် ငါရှင်းပြမယ်
၁။ အချက်က ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားက လူသတ်လို့သေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုရတာက ဟော့ဒီမှာကြည့် 'ငါသည် ကိုအသက်ကို ကိုယ့်အလိုအလျှောက်စွန့်၏ ' ဆိုတာပါပဲ နောက်ပြီး ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ကားတိုင်ခရီးစ ဉ်မှာကြည့်ရင်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားက ' အကျွနု်ပ်၏ အသက်ဝိညာ ဉ်အား ကိုယ်တော်လက်သို့အပ်ပါ၏ ' လို့ဆိုထားတယ်ကွာ နောက် လူသတ်သမားက လှံဖြင့် ထိုးသတ်ရန်ကြည့်ပြီး သေမသေကိုစမ်းတော့ ခရစ်တော်ဘုရားက ' အသက်တော်ကို စွန့်ပြီးနေပြီးသား ဖြစ်ကြောင်းကို အရှင်းသားအတိုင်း ' လို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကွာ၊ ဒါ့ကြောင့် ငါကလူသတ်လို့သေတဲ့ဘုရားဆိုရင်တော့ ငါလည်း မကိုးကွယ်ဘူးလို့ပြောရတာပေါ့ကွာ"
ရှင်းပြနေသည်က စိတ်ရောကိုယ်ပါမိုထင်ရဲ့ သူ့နေဖြင့် နားထောင်ရသည်ကလည်း တဆင့်စကား သမ္မာကျမ်းစကားတို့သည် တလွဲတချော်ဖြစ်နေပြီး၊ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ နောက်တဆက်တည်းပင် ပါးခိုရ်လာက ယေရှုခရစ်တော် သေခြင်း၏အရေးပါပုံအား ဆက်၍ရှင်းပြလေသည်။
၂။ အချက်က " ခရစ်တော် ဤလောကကို ကြွလာရခြင်းက တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်သလို သာမန်အမှုလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး၊ ဤလောကကို ကြွလာမည့်အကြောင်းကို ဟိုနှစ်ပေါင်း ဘီစီ ရဝဝ ကတည်းက ကြိုတင်ပြောထားသော ကတိတော်စကားဖြစ်ပြီး၊ သူ၏မွေးဖွားခြင်းမှအစ သေခြင်းတိုင်အောင် အနာဂတ္တိဆိုတဲ့ တဘောင့်စကားတွေနှင့် ကြိုတင်ပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေပါ။ လက်တွေ့ရှင်းရှင်းဆိုကြပါစို့ အခု မင်းတို့ငါတို တတွေအနေနှင့် ကာယ၊ ဝစီ၊ မနော ဆိုတဲ့ အကုသိုလ်အပြစ်ကြွေးတွေကို နေ့ရက်အစ ဉ်တိုင်းကျူးလွန်နေကြပြီး၊ ကုသိုလ်တပဲ ငရဲတပိဿာ ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ကို ကိုယ်မကယ်နိုင်သလို၊ ကိုယ့်ကိုလည်း သူမကယ်နိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ ဘုရားရှင် က တပါးတည်းသော သားတော် ယေရှုခရစ်ကို ဤလောကသို့ စေလွတ်၍ ကိုယ်စားပြု ယတြာခံခဲ့ခြင်းဖြင့် အသက်လမ်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးခဲ့တာက လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့ ၊ မာန်ခဝါချပြီး လက်ခံယုံကြည်သောသူတိုင်းအတွက် ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းကာ အို၊ နာ၊ သေခြင်းမှ လွတ်ကင်းရာ တမလွန်အေးငြိမ်းရာဘဝကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးသက်သက်မို့ လွန်စွာအရေးပါအရာ ရောက်လှပါတယ်ကွာ၊ ဒါကိုမသိနိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာမှကတော့ ဤလောက၏ ဘုရားသည် သူတို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏ လို့ဆိုထားတယ်ကွ"
သူပြောသောစကားများကို နားထောင်နေသော သူပင်လျှင် ဤသို့ထင်မှတ်မထားခဲ့ပေ၊ ထိုသို့ဆိုပါက ခရစ်တော်သည် အစိမ်းသေဟူ၍ ဆိုသော်လည်း သူနှင့် လောကီလူသားတို့အတွက် သေရန်ကြွဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သေခြင်းတရားကလည်း ကတိတော်ရှိသည့်အတိုင်း သေခြင်းတရားကို ပြောဆိုထားသော ကတိစကားနှင့်အညီး သေခြင်းတရားမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်ကို၊ သမ္မာကျမ်းစာမှာသာမက အပြင်သက်သေများဖြင့်ပင်လျှင် စစ်မှန်ကြောင်းပြသနေပေသည်။
ဤသို့မှန်နေပါက သူ့အနေဖြင့် ထပ်ဆင့်၍သိလိုသည်မှာကား 'ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်း အဘယ်သို့သိနိုင်ပါအံ့နည်း '။
" ဒီလိုဆိုရင် ငါ့အနေနှင့် ယေရှုကိုကိုးကွယ်ခြင်တယ်ကွာ၊ အဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ ငါ့အနေနှင့် ဘယ်လိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပါဦး"
" ဟော့ဒီမှာ နွေဦး 'ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကို မြည်းစမ်း၍သိမှတ်ကြလော့၊ ကိုယ်တော်ကိုခိုလှုံသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏' လို့သမ္မာကျမ်းစာက ဆိုထားပါတယ် နွေဦးရာ ဆန္ဒရှိသူအတွက်တော့ ဘုရားရှင်က ကယ်မဖေးကူရန် အဆင်သင့်ပါကွာ "
" ဟုတ်ပါပြီကောကွာ ငါအခုဘာလုပ်ရတော့မှာလည်း"
" ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြင့်သာ ဆုတောင်းလိုက်ပါ နွေဦးရာ ကဗျာကာရန် မညီတာကို ဘုရားက မကြည့်ပါဘူး၊ စိတ်နှလုံးကိုသာကြည့်တဲ့ဘုရားက အသက်ထင်ရှားရှိတော်မူသည့်အကြောင်းကို သက်သေထူပါလိမ့်မယ်ကွာ "
သူ့အနေဖြင့် ဘုရားဟူသည် ဘုရားသာဖြစ်ပြီး၊ အမှားအမှန်ကို သိမြင်လာသည်နှင့်အမျ လက်တွေ့ကျကျသိရှိနိုင်ရန် ပါးခိုရ်လာတို့အား ရှေ့မှတိုင်ပေးရန် တောင်းဆိုပြီး ခရစ်တော်ဘုရားအား အသက်ထင်ရှားရှိပါက သက်သေထူပေးရန်နှင့် မိမိဘဝအသက်တာတွင် ဆက်လက်၍အုပ်စိုးလမ်းပြပေးတော်မူရန် တောင်းခံလိုက်လေသည်နှင့် အမျ အနှစ်နှစ်အလလက မျော်လင့်တောင့်တခဲ့သော ဘဝ၏ ကွက်လပ်တို့သည် တမဟုတ်ချင်း ပြည့်လျှံသွားကာ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့က ရင်တွင်းမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ စီးဆင်းနေသည်က ပါးခိုရ်လာ ပြောသောစကားဖြင့် ပြောရပါက ' အသက်ရေထွက်ရာ စမ်းရေတွင်း' ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ခံစားနေရလေသည်။
ကိုယ်ကာယအတွက် ကိုယ်ကာယ အစာကိုကျွေးလေမှ ခန္ဒာသည် ဝဖြိုးကျန်းမာလာနိုင်ပေသည်။ စိတ်နှင့်ပါတ်သက်သော အစာအဟာရကိုလည်း စိတ်နှင့်ဆိုင်သော အစာအဟာရကသာ လိုက်ဖက်ညီထွေစေ၍ စိတ်ကိုကျန်းမာဝဖြိုးစေနိုင်ပေသည်။ ထို့နည်းတူစွာ နာမ်သက်ဝိညာ ဉ်အတွက်လည်း နာမ်သက်ဝိညာ ဉ်နှင့် ဆိုင်သော နံဝိညာ ဉ်ဘုရားနှင့်သာ ဆက်နွယ်လေပါမှ နာမ်သက်ဝိညာ ဉ်သက် ကျန်းမာ၍ ကိုယ်ခန္ဒာစိတ်ဝိညာ ဉ် သုံးပါးစလုံး အေးငြိမ်းချမ်းသာရလေသည်တကား။
နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေဖြစ်ခဲ့သော နွေဦး အခုတော့ ဘုရားရိပ်ရဲ့နေခြည်အောက်မှာ သောကတွေကင်းရှင်း၍ ဘဝခရီးက ယခုဘဝ နောင်ဘဝအတွက် မျော်လင့်ခဲ့သော နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အောင်ဘာလေ ဆုကြီးကိုလည်း ယခုတော့ ဘုရားကိုသိုလ်ဖြင့် ရရှိခံစားရပြီ၊ စိတ်အေးလက်အေးဖြင့် အသက်သာသစ်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ရပြီဖြစ်သောကြောင့် ၊ နေမြင့်လေလေ ဘုရားရှင်နှင့် သိကျွမ်းခြင်းက ရင့်သန်လေလေပင်ဖြစ်နေလေ၏။ ။
by Samuel Soe lwin - 9:08:00 PM